Indawo entle eBurmesterhaus - I-Airbnb
Indawo entle eBurmesterhaus
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarketta
IBurmesterhaus esandula ukulungiswa bubutyebi be1860 obukweyona ndawo indala yaseBerchtesgaden, kumbindi wedolophu. I-Harmony, indawo yethu epholileyo kunye neyanamhlanje inamagumbi ama-2: igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye negumbi lokulala. Yonke into ikumgama wokuhamba!
Burmesterhaus ibonakalisa amagumbi ale mihla kumbindi wesixeko. Izindlu ezijikelezileyo zintle kwaye imbonakalo yeentaba iyamangalisa. Indawo ephangaleleyo yeHarmony ijonge egadini emva kwendlu.
IBurmesterhaus ikwiNonntal, eyona ndawo indala yaseBerchtesgaden. Yimizuzu nje embalwa ukuya kwindawo yabahambi ngeenyawo, apho zonke iikhefi, iivenkile kunye neeresityu zikhona. Kodwa uyeza ukonwabela ubume beBerchtesgaden kwaye ukusuka kwindlu yethu ungaqala sele uhambahamba. Iibhasi ofikelela kuzo ngokulula echibini iKönigssee okanye iRamsau's Hintersee-lake okanye i-Oberslazberg zonke zifumaneka kuloliwe/kwisikhululo sebhasi (1,5 km ukusuka kuthi). IBerchtesgaden yindawo encinci, emi ezintabeni, ngoko umbono omangalisayo weentaba uphelele apha.
Umbuki zindwendwe ngu- Marketta
My hobbies range from…
Sihlala eBurmesterhaus ngokunjalo kwaye sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kubewona mava angcono ngokunikezela ngolwazi kunye neengcebiso malunga nokuqhubeka edolophini nakwindawo ezingqongileyo. Singakucebisa nantoni na ukusuka kwiindlela zokuhamba kunye ne-ski slopes ukuya kwiikonsathi kunye nokuthenga. Ukuba uyafuna, sinokuhlala sidibana kwigumbi lethu eliqhelekileyo ukuze sixoxe ngezicwangciso zakho!
Sihlala eBurmesterhaus ngokunjalo kwaye sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kubewona mava angcono ngokunikezela ngolwazi kunye neengcebiso malunga nokuqhubeka edolophini nakwindawo ezin…